ဆံပင်ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ Celine Dion
ခုရက်ပိုင်းထဲမှာ Instagram ပေါ်က Celine Dion ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို သူမရဲ့ ပရိသတ်အများစုက… “ဒါဟာ ငါတို့သိတဲ့ Celine Dion မှ ဟုတ်ရဲ့လား” … ဆိုတဲ့ ဇဝေဇဝါဖြစ်မှုတွေနဲ့ နှစ်ခါပြန်ကြည့်နေကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ Dion ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံအသစ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို အရင်မြင်နေကျ ပုံစံအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ အခုတွေ့နေကြရတဲ့ ပုံထဲကလို နှဖူးပေါ်မှာ ဆံမိတ်လေးတွေချထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုးနဲ့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေမျက်စိထဲမှာ အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်ပြီး မျက်စိလည်သွားကြရတာမျိုးပဲ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်ပုံစံအပြင် သူမရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းတွေက အရင်တုန်းကနဲ့ လုံးဝမတူတော့ဘဲ ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အလန်းစားတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတော့ ဇဝေဇဝါဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ချင်စရာပါ။
Dion ဟာ အဲဒီပုံလေးကို ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo မြို့က ဟိုတယ်တစ်ခုအတွင်းမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီကို Dion ရောက်နေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Asian Tour ရှိုးပွဲစဉ်လို့ ပြောရင်ရနိုင်မယ့် ရှိုးပွဲတစ်ခုကို Tokyo မြို့မှာ သီဆိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် သူမဟာ စောနက ခပ်လန်းလန်းပုံအောက်မှာ “ဒီညကတော့ Tokyo ညပါပဲ။ Tokyo ရေ… ရှင်တို့ရော အဆင်သင့် ဖြစ်ကြပြီလား”… ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို ရေးခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Thank you Tokyo for the warm welcome and for being an amazing audience at our first show! – Team Céline . Merci Tokyo pour l’accueil chaleureux et pour avoir été un public extraordinaire pour notre premier spectacle ! – Team Céline . ?: Yoshika Horita . ‪#CelineDionLive2018‬
ဒါပေမဲ့ နှဖူးပေါ်မှာ ဆံယဉ်ချထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံသစ်ကို နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ရှိုးပွဲစင်မြင့်ထက်က Dion ရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ်မှာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ နောက်… ပွဲအပြီးမှာ အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူစုရိုက်ထားတဲ့ ပုံထဲမှာကျပြန်တော့လည်း ဆံပင်ပုံစံအသစ်နဲ့လိုပါပဲ။ အဲဒီအတွက် သူမဟာ ဆံပင်ပုံစံအသစ်ကို တချို့နေ့တွေ၊ တချို့အချိန်တွေမှာပဲ ရွေးချယ်သုံးတာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Throwback to one of our first days in Japan. Thank you for the amazing #Kurios time @cirquedusoleil ! – Team Céline . Souvenir d’une de nos premières journées au Japon. Merci pour ce fabuleux cabinet des curiosités #Kurios #cirquedusoleil ! – Team Céline . #CelineDionLive2018
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ Dion ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံး၊ လေးရက်တုန်းကလည်း စင်ပေါ်မှာအားပါးတရဖျော်ဖြေနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကို သူမရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပုံလေးက Tokyo မှာ သူမသီဆိုတဲ့ ရှိုးပွဲက ပုံမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက Las Vegas မှာ နားခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ ထွက်လာတဲ့ ပုံဟောင်းလေးတစ်ပုံလို့ သိရပါတယ်။
It’s your turn Macao! Will you join us? – Team Céline . C’est votre tour Macao ! Serez-vous des nôtres ? – Team Céline . ?: @denisetruscello . #CelineDionLive2018
A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Jun 28, 2018 at 2:55pm PDT
အဆိုပညာဆိုင်ရာ ဆုများစွာရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံသူ Dion ဟာ အဲဒီတုန်းက အခုလို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“ရှင်တို့ သိကြရဲ့လား။ ကျွန်မမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ နည်းနည်းဖြစ်သွားလို့ တချို့အချိန်တွေမှာ ရှိုးပွဲတွေကို သိပ်မဆိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကျွန်မ ပြောတော့မယ်။ သီချင်းတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ဆိုနိုင်တော့မှာမို့ ကျွန်မ အရမ်းအရမ်းကို ပျော်နေရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တော့ စတိတ်စင်မြင့်တွေဟာ ကျွန်မအတွက် ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် အဝေးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့အိမ်လိုပါပဲရှင့်။ ပြီးတော့ ခုည ဒီနေရာမှာ ဒီလိုရပ်နေရတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်မ နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်”
ဂီတအနုပညာလောကထဲမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီး အခုလက်ရှိအချိန်အထိ အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ Dion ဟာ အခုတော့ အသက် ၅၀ ရှိခဲ့ပါပြီ။ သူမရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူ Rene’ Ange’lil ကတော့ သူမနဲ့ အနှစ်၂၀ကျော်လောက် ပေါင်းသင်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Dion ဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ ချစ်သူအသစ်ထပ်ရှာမယ့် အရိပ်အယောင်တွေ လုံးဝမပြခဲ့ပါဘူး။ မုဆိုးမတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး Rene’ Ange’lil နဲ့ရခဲ့တဲ့ သားသုံးယောက်ကို ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်ရင်း ခုလို အလန်းစားဖက်ရှင်တွေနဲ့ စင်မြင့်တွေထက်မှာ ဆက်လက်သီဆို ဖျော်ဖြေနေဆဲပဲဆိုတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ။
Music NewsCelebritytour news
PREVIOUS POST Previous post: Offset နဲ့ မစေ့စပ်ခင်ကတည်းက တိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာခဲ့တဲ့ Cardi B
NEXT POST Next post: လူသေပေမယ့် နာမည်မသေဘူးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ XXXTENTACION